Uhlalutyo lweParrot Swing: Isiqingatha sedrone yesiqingatha senqwelomoya esilawulwayo | Iindaba zeGajethi
Uhlalutyo lweParrot Swing, isiqingatha sedrone yesiqingatha senqwelomoya
Ngeli xesha sikuzisa Uhlalutyo lweParrot Swing, I-minidrone entsha evela kumenzi weParrot kwaye isinika umbono wokuba kude kube ngoku awukabonwa kuso nasiphi na esinye isixhobo, i-hybride phakathi kwedrone kunye nenqwelomoya ekuvumela ukuba uqhube idrone ngazo zombini iindlela zokuhamba kunye kwinqanaba lokuzonwabisa. . Umxholo omtsha wokusebenzisa ulonwabo oboniswe njengenketho enomtsalane kwabo bafuna Yonwabela isantya esiphaphazelayo senqwelomoya we-rc kunye Ukulula kokuthatha indawo yedrone kunye nokuhlala emhlabeni. Ixabiso layo yi- $ 139 kwaye ungayithenga ngokunqakraza apha.
1 Inqwelomoya yeDrone, ingcinga emnandi
2 I-Parrot Swing, i-hybrid phakathi kwe-drone kunye ne-rc moya
3 Umlawuli weFlypad, uyonwabile
4 Ukuzimela kweedrone kunye nomlawuli
7 Isiphelo seParrot Swing
8 Ukuthenga phi iParrot Swing?
9 Igalari yezithombe
Inqwelomoya yeDrone, ingcinga emnandi
Umbono wokujoyina i-drone kunye nenqwelomoya kwisixhobo esinye kubonakala kufanelekile; Ngoku, umceli mngeni obaluleke kakhulu kukufumana Zombini iindlela zokubhabha zilula ukuqhuba kwaye Utshintsho phakathi kwendiza yedrone kunye nenqwelomoya yenqwelomoya yenziwa kamnandi kwaye ngaphandle komngcipheko. Kwaye ngokuchanekileyo amandla eParrot Swing; nge chukumisa iqhosha elilula Singahamba ukusuka kwi-drone ukuya kwinqwelomoya kwaye ngokuchaseneyo maxa onke kwaye unemvakalelo yokulawula i-100% yesixhobo kwaye akukho luhlobo lomngcipheko.
Ukhupha isixhobo kwimowudi yedrone, ufumana ukuphakama okuyimfuneko, uchukumisa iqhosha kulawulo lweFlypad kwaye sele ubhabha kwimowudi yenqwelomoya ngokukhululekileyo kwaye ngaphandle kwengxaki. Emva koko, xa ubhabha kwimowudi yenqwelomoya, ungacinezela iqhosha ukuze utshintshele kwimowudi yedrone kwaye isixhobo siya kubeka endaweni entle kwaye siqale ukubhabha ngokungathi sisidrone esiqhelekileyo. Izandi zilula ... Kwaye ilula nyhani!.
I-Parrot Swing, i-hybrid phakathi kwe-drone kunye ne-rc moya
IParrot Swing isebenza njengenqwelomoya ye-rc nanjenge-drone, kodwa njengoko kulindelwe ayibonakali ngokukodwa kwezi zombini ezi ngcamango. Kwinqanaba le-drone, ukubhabha kwayo kulula kakhulu, ngokusisiseko le ndlela yokubhabha yenzelwe kuphela ukwenza ukufuduka kunye nokufika kwesixhobo.
Kwinqanaba leenqwelomoya ze-rc kufuneka sibonise ukuba ayikhawulezi ngokugqithisileyo, ukufikelela kwisantya se Iikhilomitha ezingama-30 ngeyure, ngokufana neenqwelo-moya ezilawulwa ngunomathotholo. Ke ukuba ukhe walusebenzisa olu hlobo lwesixhobo ngaphambili, awuyi kufumana nto intsha kwi-Swing.
Kodwa eyona nto imnandi kukuba nayo ukubanakho ukonwabela zombini iindlela zokubhabha kwisixhobo esinye. Ii-Drones zilula ukuqhuba kwaye oko kube lula kakhulu ukwenziwa kwazo phakathi kwabasebenzisi, ngelixa ukubhabha inqwelomoya ye-rc kubuthathaka ngakumbi kuba nayiphi na ingxaki ngexesha lokufika inokuthi iyonakalise. Kwaye yiloo nto kanye ekuvunyelwa yiParrot Swing; Nokuba yeyiphi umsebenzisi we-novice angakonwabela amava okuqhuba ngenqwelomoya ye-rc ngaphandle komngcipheko kwaye ngaphandle kokwenza isifundo esimbaxa.
Umlawuli weFlypad, uyonwabile
Ukongeza kwiParrot Swing, sikwazile ukuvavanya iFlypad, ulawulo lwerhawuti olutsha lweParrot, ethe yasothusa kakhulu. Kudala, uParrot egxekwa ngokunikela kuphela ulingo lwee-minidrones zayo nge-smartphone, engakhange iqinisekise bonke abasebenzisi.
Kwaye ekugqibeleni uParrot uthathe isigqibo sokuphelisa le ntsilelo ngokusungulwa kweFlypad, umyalelo esiwuthandileyo kwaye ngokuqinisekileyo uya kuthi ubonelele ngokudibanisa kwiidrones zohlobo.
Umgangatho wokuziva kweqhina ngowesibini kuye namnye, onoluvo oluphezulu kakhulu. Lulawulo olunobunzima, kodwa ngawo onke amaxesha sinemvakalelo yokuba sisisindo esidityaniswe nomgangatho kunye nokomelela kolawulo, ukuze sikubone njengento elungileyo.
Ukuzimela kweedrone kunye nomlawuli
Ukujikeleza kubandakanya ibhetri ye-550 mAh ebonelela malunga 7-9 imizuzu yokuzimela kuxhomekeke kwimowudi yakho yokukhwela, ngelixa isikhululo seFlypad sihlala ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-6 ngenxa yebhetri ye-200 mAh.
Utshintsho olusuka kwimo yokubhabha enye uye kolunye ilula kakhulu kwaye iyasebenza
Umlawuli weFlypad usebenza kakuhle
Ingabhabha kuphela ngaphandle komoya
Ukuhamba kancinci ukubhabha njengeenqwelomoya
Isiphelo seParrot Swing
IParrot Swing yile isixhobo esihle kakhulu kwaye oko kuyakwenza ukuba ube nexesha elimnandi ngelixa uliqhuba. Ijolise ngokukodwa kwicandelo eliqalisiweyo. Ukuba ungumsebenzisi oyingcali ekubalekeni kweedrones kunye neenqwelomoya ze-rc, kuyinyani ukuba iyakushiya ufuna isantya kunye nobunzima bokubhabha, kodwa ayingabo abaphulaphuli ekujoliswe kubo kwezi ntlobo zezixhobo.
Ukuthenga phi iParrot Swing?
UneParrot Swing kunye nolawulo lweFlypad oluthengiswayo ngexabiso le- € 139,90 Kwiwebhusayithi yokudlala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlalutyo lweParrot Swing, isiqingatha sedrone yesiqingatha senqwelomoya
I-HTC inikezela ngokusesikweni i-HTC U Ultra kunye ne-HTC U Play ukunqanda iziphumo ezibi
I-Android Wear 2.0 iza kwii-smartwatches ezifanelekileyo ngoFebruwari